आफ्नो क्षमता पहिचान गर्नुहोस् ! | चितवन पोष्ट
वर्तमान अवस्थालाई नियालेर अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिवक्ता प्रेम रावतले भिडियोका माध्यमबाट मानिसहरूलाई आफ्नो सन्देश दिइरहनुभएको छ । उहाँको सन्देशको केही अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
मानिसको क्षमता के हो ? यदि मानिसमा रिसाउने क्षमता छ भने उसमा शान्त रहने क्षमता पनि छ । यदि मानिसमा प्रेम गर्ने सामथ्र्य छ भने उसमा घृणा गर्ने सामथ्र्य पनि हुन्छ । यदि मानिसमा आनन्दको अनुभव गर्ने विशेषता छ भने उसमा दुःखी र हैरान हुने विशेषता पनि छ । मानिसमा शान्ति छ भने उसमा अशान्ति पनि छ । दुवै कुरा छन् अनि दुवै साथमै हिँड्छन् । मूल कुरा के हो भने तपाईं कुन चाहिँ क्षमतालाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ । तपाईं जुन क्षमतालाई बढी प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ, जीवनमा त्यही नै सक्षम हुन्छ ।
हरेक मानिस फरक हुन्छ । यदि मानिसले चाहेमा आफ्नो यो क्षमता तथा सामथ्र्यलाई पहिचान गरेर जीवनलाई सफल तुल्याउन सक्छ । पृथ्वीमा कैयौँ मानिसहरू छन् अनि आगामी दिनमा पनि हुनेछन् तथापि तपाईंजस्तो अर्को कोही पनि मानिस न त अहिले छ, न त पछि हुनेछ । तपाईं जसरी हाँस्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, जस्तो सोच्नुहुन्छ त्यो आफैँमा विशेष छ । त्यसकारण हरेक मानिसले आफ्नो सामथ्र्य र क्षमतालाई चिन्नु आवश्यक छ । किनभने, यही क्षमताका कारण नै मानिसले आफ्नो जीवन परम आनन्दले भरिपूर्ण बनाउन सक्छ । उसको जीवनमा वास्तविक शान्ति र प्रेमको सञ्चार हुन सक्छ अनि यथार्थमा जीवनलाई सफलीभूत तुल्याउन सक्छ ।
मानिसले मेरा बारेमा अरूले के सोचिरहेका होलान् भनेर चिन्ता गर्नु हुँदैन । यदि तपाईं जीवनमा कुनै कारणले असफल हुनुभयो भने पनि कहिल्यै त्यो असफलतालाई स्वीकार नगर्नुहोस् । र, पहिला पनि तपाईंले यस्तो गर्नुभएको छ । तपाईं बाल्यावस्थामा हिँँड्न सिक्दाखेरि हिँड्नका लागि कैयौँपटक उठ्नुभयो अनि लड्नुभयो । तर, तपाईंले हिँड्न नसिकेसम्म त्यो असफलतालाई स्वीकार गर्नुभएन । परिणामतः तपाईंले हिँड्न सक्ने हुनुभयो ।
तपाईंका ती क्षमताहरूबाट तपाईं कहिल्यै पनि वञ्चित हुनुहुन्न । तपाईं जहाँसुकै जानुहोस्, यी सबै कुरा तपाईंसँगै हुन्छन् । मानिसभित्र आँधीबेहरी आएपछि त्यहाँबाट निस्केर हामीभित्र विद्यमान त्यो वास्तविक क्षमता, त्यो शक्ति जसले सारा विश्वलाई चलाइरहेको छ– त्यसको अनुभव भएपछि शान्ति उत्पन्न हुन्छ । जबसम्म उसले त्यो वास्तविक क्षमता र शक्तिको अनुभव गर्दैन तबसम्म आफूले आफूलाई पूर्ण रूपले चिन्न सक्दैन– ‘ऊ के हो !’ किनभने, मानिसले आफूभित्र रहेको त्यो चीजको अनुभव गर्न सक्छ जसको ऊ एउटा अंश हो । जसको कुनै सीमा हुँदैन, जसको कहिल्यै नाश हुँदैन ।
एउटा कथा छ । एउटा गाउँ थियो । त्यो गाउँको जङ्गलमा एउटा सर्प बस्थ्यो । गाउँबाट पँधेरासम्म जानका लागि बाटो त्यतैबाट पथ्र्यो । त्यही बाटो भएर मानिसहरू खाने पानी लिनका लागि जाने गर्दथे । सर्प एकदमै डरलाग्दो थियो । उसले सबैलाई डस्ने गथ्र्यो । मानिसहरू उसदेखि एकदमै डराउँथे । यस्तो परिस्थिति पनि सिर्जना भयो– मानिसहरूले त्यो बाटोबाट आवतजावत गर्नै छोडिदिए । अब मानिसहरूलाई पानीको समस्या हुन थाल्यो । मानिसहरूले प्रार्थना गर्न लागे– “हे, सृष्टिकर्ता ! हामीलाई यो समस्याबाट छुटकारा दिलाउनुहोस् । केही यस्तो गर्नुहोस् जसद्वारा हामीलाई आउन–जान सहज होओस् ।”
मानिसहरूको पुकारा सुनेर सृष्टिकर्ताले सर्प भएको स्थानमा गएर भने, “तिमी यहाँ के गरिरहेका छौ ? मानिसहरूलाई किन डस्छौ ? किन दुःख दिन्छौ ?”
अनि साँपले भन्यो, “माफी चाहन्छु ! अबदेखि यस्तो हुँदैन । यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने म कसैलाई पनि डस्दिन । कसैलाई पनि दुःख दिँदिन ।”
सर्पले मानिसहरूलाई डस्न, दुःख दिन छोड्यो । त्यसपछि मानिसहरू त्यहाँबाट आवत–जावत गर्न थाले । मानिसहरूले सर्पलाई नदेखेपछि त्यसको खोजी गर्न थाले– ‘कहाँ गयो ?’ जसै उनीहरूले सर्पलाई देखे उनीहरूले उसतिर ढुङ्गा प्रहार गर्न लागे । अब बिचरा त्यो साँपले न कसैलाई डस्न सक्छ, न त तर्साउन सक्छ । न त केही गर्न सक्छ । उसको अवस्था नाजुक हुन लाग्यो । हरेक दिन मानिसहरू पानी लिन जाँदा आफूसँग ढुङ्गा लिएर जाने अनि उसलाई ढुङ्गाले हिर्काउने गर्न थाले ।
साँपको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भयो अनि ऊ मरणासन्न अवस्थामा पुग्यो । तब उसले सृष्टिकर्तालाई प्रार्थना गर्दै भन्यो– “केही गर्नुहोस् ! तपाईंको आज्ञा मान्नाले मेरो यस्तो अवस्था भयो । मलाई बचाउनुहोस् ।”
साँपको हालत देखेपछि उनी आएर उसलाई सम्झाउँदै भने, “तिमी एउटा काम गर ! नडस तर मानिसहरू तिम्रो छेउमा पुगेपछि तिमी फणा पैmलाएर बस । तिमी फणा पैmलाएर बस्यौ भने मानिसहरूलाई ‘यसले डस्छ’ भन्ने लाग्छ । यसो गर्नाले मानिसहरू तिमीभन्दा टाढै बस्छन् अनि तिमीलाई ढुङ्गाले प्रहार पनि गर्दैनन् । उनीहरू पनि बाँच्न सकून् अनि तिमी पनि बाँच्न सक्छौ ।
यो कथाले हामीलाई नरम हुने प्रेरणा प्रदान गर्छ । जसमा नम्रता हुन्छ त्यो नै उसको सबैभन्दा राम्रो गुण हो । त्यो नै सबैभन्दा ठूलो क्षमता हो ! अपबल, तपबल, बाहुबल– यो वास्तविक शक्ति होइन । किनभने, एकदिन यो संसारबाट बिदा लिनुपर्छ । यो शरीर त माटामा मिल्नेछ । त्यसकारण विनाअर्थको अभिमानलाई छोडेर आफूभन्दा कमजोर र विनम्र मानिसलाई बल प्रयोग गर्नु हुँदैन । आफूभित्रको क्षमतालाई चिन्नुपर्दछ । जसका कारणले तपाईंको भेट ती सृष्टिकर्तासँग होओस् । तब मात्रै यो जीवन वास्तवमा सफल हुन्छ । कुरा केवल के हो भने के हामीले आफ्नो जीवनमा त्यो वास्तविक क्षमतालाई स्वीकार गरेका छौँ या छैनौँ ? यदि ग¥यौँ भने त्यो क्षमता तपाईंभन्दा टाढा छैन । जबसम्म हामी जीवित हुन्छौँ, हामी निराश हुनु आवश्यक छैन । यो हो हाम्रो वास्तविक क्षमता ! मानिसको वास्तविक सामथ्र्य हो– आफूले आफूलाई चिन्नु, आफ्नो हृदयलाई शान्तिले भरिपूर्ण तुल्याउनु ।